တချို့မိန်းက​လေး​တွေထက်​တောင် မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ရာမှာ ထူးချွန်တဲ့ ​ယောကျ်ား​လေး K-Pop Idol (၅) ဦး
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း K-Pop idol ​တွေဟာ ​နေ့တိုင်းလိုလို မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ခြင်းနဲ့ မကင်းပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် Idol ​တွေဟာ စင်​ပေါ်မတက်ခင်၊ ရိုက်ကူး​ရေးမလုပ်ခင် မိတ်ကပ်ပညာရှင်​တွေက ဖြီးလိမ်းပြင်ဆင်​ပေးတာကို အသင့်ခံ​နေလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါ​ပေမဲ့ တချို့​သော ​​ယောကျ်ား​လေး K-Pop Idol ​တွေဟာ အံ့အားသင့်ဖွယ်​ကောင်း​လောက်​အောင် မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်တဲ့ ​နေရာမှာ ​ထူးချွန်ကြပါတယ်။ ယခုတစ်ခါမှာ​တော့ အဲ့လို မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်တဲ့​နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ​ယောကျ်ား​လေး K-Pop Idol (၅) ဦးကို ​ဖော်ပြ​ပေးချင်ပါတယ်။ သူတို့က​​တော့
1. MONSTA X အဖွဲ့ဝင် Shownu
MONSTA X အဖွဲ့ဝင် Shownu ဟာ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဗလ​တောင့်​တောင့်နဲ့ ​ယောကျ်ားပီသတဲ့ အသွင်အပြင်ရှိတာ​ကြောင့် မိတ်ကပ်ပြင်တတ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ​ပေမဲ့ သူဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က “Lipstick Prince” ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာ ​ယောကျ်ား​လေး K-Pop Idol ​တွေက မိတ်ကပ်ပညာကို ​လေ့လာသင်ယူရပြီး မိန်းက​လေး Idol ​တွေ မင်းသမီး​တွေကို မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်​ပေးရတဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
Shownu ဟာ ထိုအစီအစဉ်မှာ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်း​တွေကို ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိ​နေတဲ့ ပုံစံကို ပြသခဲ့ပြီး ပုံမှန်အချိန်​တွေမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်​လေ့​မရှိတဲ့သူတစ်​ယောက်ဖြစ်​ပေမဲ့ ရလဒ်က​ အ​တော်​လေး အထင်ကြီးစရာ​ကောင်းပါတယ်။
2. NCT127 အဖွဲ့ဝင် Doyoung
Shownu နဲ့ အလားတူပဲ NCT127 အဖွဲ့ဝင် Doyoung ဟာလည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်တုန်းက “Lipstick Prince” အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိတ်ကပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အ​သေးစိတ်ကျတဲ့ ဗဟုသုတနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတို့​ကြောင့် မိတ်ကပ်ပညာရှင်အလား​ ထင်မှတ်မှား​စေခဲ့ပါတယ်။
မိန်းက​လေး​တွေ​တောင် ဆွဲရခက်တဲ့ eyeliner ကိုလည်း သူဟာ အလွယ်တကူပဲ ဆွဲပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် ထိုအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ မိန်းက​လေးဧည့်သည်​တွေကလည်း Doyoung ကို တခြားသူ​တွေထက် ယုံကြည်မှုပိုရှိပြီး ချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။
3. GOT7 အဖွဲ့ဝင် Jay B
Jay B (JB) က​တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်က Dingo ရဲ့ “Pouch For You” ဆိုတဲ့ YouTube Content တစ်ခုကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအစီအစဉ်က​တော့ နာမည်​ကျော် K-Pop Idol ​တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပရိသတ်​တွေကို မိတ်ကပ်ပြင်​ပေးရမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပြင်ဆင်​ပေးလိုက်တဲ့ ပရိသတ်​နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အလှပြင်ပစ္စည်း​တွေကို ​ရွေးချယ်​ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ​ကြောင့် Jay B ကလည်း ကံ​ကောင်းတဲ့ fan girl ​လေးတစ်​ယောက်ကို သူကိုယ်တိုင် မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်​ပေးခဲ့ပြီး သူမနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အလှကုန်​တွေကို ​ရွေးချယ်​ပေးခဲ့ပါတယ်။ Jay B ဟာ သူများကို တစ်ခါမှ မိတ်ကပ်မလိမ်းခြယ်​ပေးဖူးတဲ့အတွက် အစပိုင်းမှာ အနည်းငယ် ခက်ခဲ​နေပုံ​ပေါ်​ပေမဲ့လည်း ​နောက်ဆုံးရလဒ်က​တော့ တကယ်ကို​ ကောင်းခဲ့ပါတယ်။
4. SF9 အဖွဲ့ဝင် Rowoon
Rowoon ဟာလည်း “Lipstick Prince” အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ​ယောကျ်ား​​လေး Idol ​တွေထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မိန်းက​လေးဧည့်သည်​တွေကို အလှဆုံးပြင်ဆင်​ပေးနိုင်ဖို့​အတွက် ​ကြိုးကြိုးစားစားလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီး​​နောက် သူ့ရဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ စွမ်းရည်​တွေကို ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ eyeshadow, eyeliner, နှုတ်ခမ်းနီ၊ ပါးနီစတဲ့ မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်တဲ့​​နေရာမှာ အဓိကကျတဲ့အရာ​တွေကို ကျွမ်းကျင်စွာပဲ လိမ်းခြယ်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိကအားသာချက်က​​တော့ အ​​ရောင်​ရွေးခြယ်တဲ့​​နေရာမှာ ​တော်တာပါပဲ။ ဒါ့အပြင် Rowoon ဟာ ကျင့်ဝတ်ရှိပြီး ချိုသာလွန်းတာ​ကြောင့် မိန်းက​လေးဧည့်သည်​တွေရဲ့ နှလုံးသားကို အရည်ပ​ေျာ်​အောင် ပြုစားနိုင်ခဲ့ပါ​သေးတယ်။
5. WayV အဖွဲ့ဝင် Kun
ဒီစာရင်းရဲ့ ​နောက်ဆုံးဖြစ်သလို မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်ရာမှာ အထူးချွန်ဆုံးက​တော့ WayV ရဲ့ Kun ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူဟာလည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်က “Pink Festa” ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာ သူ့ရဲ့ အံ့မခန်းအရည်အချင်း​တွေကို ထုတ်ပြခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့သူ​တွေဟာ မိတ်ကပ်ပညာရှင်​တွေရဲ့ tutorial video ​တွေကို ကြည့်ပြီး မိမိကိုယ်ကို အဲ့အတိုင်းလိုက်ပြင်ဆင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
Kun ဟာ ခက်ခဲတဲ့ makeup look ​တွေကို​တောင်မှ ​အောင်မြင်စွာ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး မျက်​တောင်တုတပ်တဲ့အခါမှာလည်း တစ်ခါတည်းနဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်ပြီး သဘာဝဆန်အောင် တပ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် သူ့ကို “Pink Festa” ရဲ့ ace ဆိုပြီး​တော့လည်း တခြားသူ​တွေက ​ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
Next 2022 ခုနှစ် Grammy မှာ အဓိကဆုကြီးတစ်ဆုအတွက် ဇကာတင်ဝင်ဖို့ အလားအလာရှိ​နေတဲ့ BTS »
Previous « 2022 ကို အပိုင်သိမ်းဖို့ ချီတက်လာကြတဲ့ TV3 က ထိပ်တန်းမင်းသမီး (၆) ဦးရဲ့ ဇာတ်လမ်းသစ်များ
BTS ရဲ့ Nomination နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကို စိတ်ပျက်​စေခဲ့တဲ့ 2022 ခုနှစ် Grammy ဆု​ပေးပွဲ